“राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो 'येसले मेरो देश बिगार्यो" – कथा - MILSALLY
Home - Nepali-नेपाली - “राजा विरेन्द्र सपनामा आउनुभयो र भन्नुभयो ‘येसले मेरो देश बिगार्यो” – कथा
शुक्रबारको रात थियो। भोलि त सनिवार हो भनेर मनमा रमाइलोपन थियो। भोलि को दिन विदा थियो, त्यसैले मलाई थाहा थियो, म मज्जाले निदाउछु। म रातको करिबकरिब १० बजे सुते होला। सुत्नासाथ भुसुक्कै निदाएछु। म निदाएको भन्ने त मलाई नै पो थाहा थिएन। कारण यो थियो कि म एउटा कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ। मैले म आफैं कुर्सीमा बसेको दृश्य देख्दा आफू निदाएको कसरी थाहा पाउन सक्थ्ये र। मैले त केवल सपना देखिरहेको थिए।
म बसेको कुर्सी अगाडि एउटा टेबल थियो। टेबलमा धेरै तस्बिरहरु थिए। तस्बिरमा को को थियो त पहिल्यै मैले हेरिन। खैर आँखा अगाडि एउटा जिवित व्यक्ति हुदाहुदै त्यो निर्जीव तस्बिरहरूलाई को हेरेर बस्छ। मेरो अगाडि एकजना व्यक्ति उभिरहेका थिए। म त्यो मानिस को रहेछ भनेर सोचिरहेको थिए। यत्तिकैमा आवाज सुने “म राजा विरेन्द्र हुँ”। म सानो हुदाँ वाँहाको वंशनास गरिएको थियो।जिउँदो हुदा त देख्न पाइन सपना मै भएपनि एकछिन केही नबोली वाँहालाई हेरेर बसे।
म मौन थिए। येत्तिकैमा मेरो टेबलमा रहेका तस्बिरहरुलाई औल्याउँदै वाँहाले भन्नुभयो “येसले मेरो देश बिगार्यो”। टेबलमा भएका थुप्रै तस्बिरहरू मध्ये मेरो नजर केही चर्चित नेता ज्युहरुको तस्बिरमा पुग्यो। मलाई लाग्यो राजा विरेन्द्रलाई नेताहरुसँग सारै नै रिस उठेको रहेछ। हुन त रिस किन नउठोस्। देशमा भ्रष्टाचार, बलात्कार र अन्य अभद्र व्यबहार बढिरहेको बेला देश र जनतालाई भलो हुने काम नगरेर पार्टी फुटाउने, जुटाउने, कुर्सी बचाउने काम गर्ने नेतासँग राजालाई रिस उठ्नु स्वभाविक नै हो। कोहि नेता भ्रष्टाचारमा प्रख्यात छन् भने कोहिलाई विदेशी शक्तिसँग हात मिलाएको छ कि भनेर नेपाली जनताले शंकालु नजरले हेर्ने गर्छन्।
कति ठाउँमा त कुन कुन नेताले अपराधीलाई संरक्षण दियो, पिडितले न्याय पाएन भन्ने हल्ला नि सुनिरहेको हुन्छु। येस्तै कुरा मनमा खेलाउदै मैले मेरा अगाडि हुनुभएका राजा विरेन्द्रलाई सोधे “के हजुरले यी नेताहरूलाई भनिबक्सेको हो?”। यत्तिकैमा वाँहाले फेरि तस्बिरहरुलाई औल्याउँदै भन्नुभयो “येसले मेरो देश बिगार्यो”। म अचम्ममा परे। आखिर कसलाई भन्न खोज्नुभएको रहेछ त नि। मेरो नजर फेरि आर्को तस्बिरमा गयो जाँहा भारतीय प्रधानमन्त्री लगायत अन्य भारतीय नेताहरु थिए।
मलाई लाग्यो अवस्य पनि राजाको रिस छिमेकी मुलुक भारत माथि नै छ। हुन पनि किन नहोस्। हाम्रा पुर्खाले दुख गरेर बनाएको देशको भुमि मिच्ने मुलुकसँग रिस उठि नै हाल्छ। मलाई भारतले नेपालमाथी खेलेको घिनलाग्दो खेलहरुको याद आयो। तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले भनेको याद आयो। युद्धमा प्रयोग भएको हतियार भारतबाट ल्याइन्थ्यो रे। लाग्यो कि भारत नेपालीहरू लडेरै मरुन् भन्ने त चाहान्थ्यो नि पहिल्यै बाट। फेरि मलाई भरतले लगाएको नाकाबन्दी याद आयो। हो दुख त छिमेकी मुलुकले सारै नै दिएको छ। नेपालमा उद्योगहरु छैनन् जसकारण भारतले नेपाललाई सजिलै हेप्न सक्छ।
पक्कै पनि राजा विरेन्द्रले भारतलाई नै भन्नुभएको हो जस्तो लाग्यो। मैले राजालाई फेरि सोधेँ “के हजुरले भारतलाई भनिबक्सेको हो?”। यत्तिकैमा वाँहाले फेरि तस्बिरहरुलाई औल्याउँदै भन्नुभयो “येसले मेरो देश बिगार्यो”। म फेरि पनि अचम्ममा परे। आखिर कसलाई भन्न खोज्नुभएको रहेछ त। फेरि मैले ऐउटा नया तस्बिर देखे। त्यो तस्बिर पक्कै पनि मलाई मन पर्ने राजनीतिक पार्टीको साधारण सभाको थियो। त्यस तस्बिरमा त स्वयम म समेत थिए। त्यो तस्बिर करिब तीन वर्ष अगाडिको थियो। मलाई त्यो दिन याद आयो जब म नेता ज्युको जोसिलो भाषण सुनेर हर्षले तालि पिट्दै थिए। मलाई थै थै भयो । मैले आफैंलाई सोधे मैलो त्यो बेला ती झुठा भाषणमा तालि किन पिटेको ?
मैले याद गरे म त्यो तातो घाममा पार्टीको नारा लगाउदै हिडेको थिए। मेरै पार्टीले केही गर्छ भन्ने भ्रममा थिए। गलत नेतको भासणमा तालि पिटेको याद आउदा आफ्नै गालामा हनेर तालि बजाम् कि जस्तो पनि लाग्यो। ओहो मलाई त बल्ल पो याद आयो। तीन वर्ष अगाडि झुठो कसम खाने नेता ज्युको साथ म आजसम्म पो दिदै छु। मैले जस्तो गल्ती गरेको अरु कति नेपाली छन् होला। म त अन्धभक्त पो भएको रहेछु। जो नेताले चुनावमा मात्र हामीलाई याद गर्छ उसको हरेक कुरामा तालि बजाएर त काहाँ हुदोरहेछ त।
मलाई आफ्नै गल्ती कोट्याउन मन लाग्यो। मलाई पार्टीको प्रचारप्रसारमा हिड्दा पेट्रोलको कुपन दियिन्थ्यो। मैले पनि पारिश्रमिक सोचेर लिने गर्थे। अहो म त आफैं नै भ्रष्ट पो रहेछु। यो त सरासर पेट्रोलसँग भोट साटेको जस्तो भैहाल्यो नि। त्योबेला मैले जस्तो पेट्रोल कतिले लियेका थिए। भनेपछि पार्टीको पैसा त धेरै नै खर्च भयो होला। आखिर काहाँ बाट आउछ येत्रो पैसा? कतै त्योबेलाको पेट्रोलको पैसा उठाउन त हैन नेता ज्युहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने?
अन्तत किनकिन मलाई मेरो देश बिगार्नुमा मेरै गल्ती छ जस्तो लाग्यो। मैलो राजा विरेन्द्रलाई सोध्न खोजे। तर सोध्न पनि नपाई आमा आएर मलाई निन्द्राबाट बिउझाइदिनु भयो। मेरो उत्तर सहि थियो या गलत पत्तो नै भएन। तर येत्ति कुरा बझेँ कि कुनैपनि नेताको अन्धभक्त भएर सबै कुरामा तालि पड्कायो भने उनिहरु शक्तिशाली महसुस गर्ने रहेछन् जुन् शक्तिले पछि म र मेरा नेपाली दाजुभाइ नै थिचिनु पर्ने रहेछ।
Related – राजसंस्था हटाउन मा कसको हात अनि कसको फाइदा?
Previous Post‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै ?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउने युवकहरु पक्राउ
Next Post‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुलुश निकालेर दबाब सिर्जना नगरौं’ – देउवा
“धरहरा बन्यो,रानिपोखरी बन्यो,मैले फेरी जिते भने विश्व चकित हुने गरी बिकासका काम गर्छु : ओली”